Markab dagaalka HNLMS GRONINGEN oo bilaabay tageerada ay Ciidanka badda ee EUNAVFOR ay siinayso mashruucan qaramada midowbay ay kor ugu qaadayan wax soo saarka khayraadka badda Soomaliya. * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Markab dagaalka HNLMS GRONINGEN oo bilaabay tageerada ay Ciidanka badda ee EUNAVFOR ay siinayso mashruucan qaramada midowbay ay kor ugu qaadayan wax soo saarka khayraadka badda Soomaliya.
By MAREEG	 On Nov 25, 2015
Maalintii khamiistii 12 kii bishi November markab dagaalka ciidanka badda ee Midowga Yurub ee HNLMS GRONINGEN aya bilaabay ilaalinta iyo difaaca markabka ay leedahay UN FAO hay’ada cuntada ee qaramada midowbay. Markabkaasi oo ay shaqadiisu tahay inu ku xidho 25 ah agabkii soo jiidanayay kallunka xeebta Soomaliya ee dherer keegu yahay 3300 km.
FAD oo ah nidam loogu talagalay in kor loogu qaado tayyada wax soo saarka kallumaysatada Soomalida. Tasoo dhigaysa dhagax khayaali ah si ay u soo jiitan kallunka ayna uga dhigaan wax soo saarka mid joogto ah.
Markabka UN ta ee Comarco Kestrel waxa halkaas ku weheelinaya markab dagaalka HNLMS GRONINGEN oo isagu ka difaacaya weerarada burcadka inta u hawshaasi u ka wado xeebta Soomaliya.
Laba gudoomiye oo ka socda qaramada midowbay ayaa markabka GRONINGEN dushiisa lagu soo dhaweeyay. Taliyaha markabka Commander Walter Hnasen ayaa halkaas ku soo dhaweeyay, waxanay ka wada xaajooden arrimo la xiriira hawlgalka iyo mashruucan hadda ka socda xeebta.
Ciidanka badda ee EUNAVFOR aya sii wadi doona ilaaada iyo difaaca markabka UN ta ee Comarco Kestren muddada u hawsha ku guda jiro si ay ugu fududeeyan horumarinta tayyada wax soo saarka bulshada Soomali